Izu Ike na akwụkwọ ahụ aja na mkpọ si dị iche iche distros | Site na Linux
Izu Ike na akwụkwọ ahụ aja na mkpọ si dị iche iche distros
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Ọdịdị / Nhazi, Imebe, GNU / Linux
Ọzọkwa m na-ewetara gị na akwụkwọ ahụ aja, na otu ugboro ọzọ m na-enyeghị mmasị na otu distro 😀
Ndị a bụ ụfọdụ akwụkwọ ahụaja nke distros dị iche iche, na-enweghị ọtụtụ mmetụta, nzụlite dị ọcha, mcder (dị ka ndị nke m tinyere n’oge ndị a) 🙂
Agbanyeghị, lee m na-ahapụ ha:
Gịnị ka ha chere? 😀
M na-eji Arch doro anya, elav na-eji nke Debian 🙂
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Izu Ike na akwụkwọ ahụ aja na mkpọ si dị iche iche distros
Ihe 93 kwuru, hapụ nke gị
Oge izizi m huru Fedora ebe a
Site n'ụzọ, onye ọ bụla maara nke distro bụ nke ikpeazụ?
Zaghachi na davo
Daalụ maka n'ọnụ 😀
Mmadụ Bịa ka saịtị 😉
Oge izizi ị hụrụ Fedora ebe a? ... ọfụma ka anyị hụ ma anyị gụrụ akụkọ ndị a nke ọma:
Ihe ndị ahụ tọrọ Metuselah
Emebikwala ihe banyere Fedora isiokwu nsen ọzọ. Yabụ kedu ihe mere na ịchọghị ederede dị mma na distro a wee bipụta ha?
N'ihi na ọ bụrụ na m etinye oge niile na-ede edemede, ha ga-abụ ihe nzuzu, ọ masịrị m ide obere na ezi nye ọtụtụ na ndị ọjọọ.
Ana m ebido n’ule.
rudolph Alexander dijo
Amaghi m onye ikpeazu, ma otu osi di gini? Aga m ebudata Arch distro nke m na-eji.
Zaghachi ka rodolfo alejandro
1920 × 1080 ma ọ bụrụ na echetara m nke ọma 😀
Amaghi m onye nke ikpeazu haha.
Ugbu a achọrọ m ịhụ mkpọ ego na-atọ ụtọ, biko (a gwara m na ị bụ ọkachamara).
You na-agwa otu onye ọkachamara kachasị na reggaetonero dị nzụlite niile na ebe niile… El Carcamal Arenoso!
Egwakọtala ihe atụ na "reggaeton". Ekwetara m na etinyewo m anya na vidiyo ụfọdụ nwere egwu dị ụtọ nke na-enyo enyo iji hụ ọnya ụmụ nwanyị na-atọ ụtọ. Ma ụmụ nwanyị gba ọtọ sitere na nka dị ọcha. Otu ezigbo uto ahụ dị ka itinye akwa akwa Vincent van Gogh XD.
Itinye ego ndị ahụ adịghị mma
Kedu ihe ị maara banyere nka.
Have nwetala ya:
Ana m enye gị ngọzi m.
N'ezie. obi ike Ọ dịghị ka ndị nke ọzọ ... ọ maghị etu esi enwe ekele maka ịma mma nwanyị, n'agbanyeghị na o nwere ike nwee akpụkpọ anụ nke ọmarịcha nwa agbọghọ si ihu ya.
Ok 🙂 M ga-eme a post banyere Linux na akwụkwọ ahụ aja, ma ụmụ agbọghọ 😉
Ka ọ dị ugbu a, ana m akwado post ndị a m mere Artdesktop.com:
Ekele gị ma nụ ya ... amam na ị ga-eme 🙂
N'ezie. Obi ike adịghị ka ndị ọzọ ... ọ maghị etu esi enwe ekele maka ịma mma nwanyị, n'agbanyeghị na ọ nwere akpụkpọ anụ nke ọmarịcha nwa agbọghọ site na ihu ya.
Ọ dị mma, amaara m ụmụ agbọghọ mara mma, otu n'ime ha bụ ihe ị chere (ọ bụrụ na ị sitere na Madrid, m ga-egosi gị foto ahụ).
Ihe m na-amaghị bụ etu m ga-esi tinye ya n’isi gị na abụghị m ọrụ maka inwe enyi nwanyị imebi ya n’ụzọ ụfọdụ. Ọ bụrụ n'ikpeazụ ahụrụ m onwe m na Cuba na-emejọ nwanyị n'ihu imi gị ...
Ee ee, nzụlite ndị ahụ adịghị mma.
Jee lee vidiyo banyere Nigthwish nke m zigara gị ma emetụla imi gị aka.
I tinyela otutu ihe, enwere niile fọrọ nke nta niile na-amasị. Ahuru m gi na ihu ndi mara mma ;-).
HAHA ee, ihu bụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke kachasị, ọbụlagodi otu n’ime ihe ndị kachasị mkpa 🙂
Mmetụta amalite na ihu 😀
EDITED: Akwụnyela m ọtụtụ ọdịnaya na-abụghị nwa agbọghọ, ihe dịka anime wdg haha ​​😉
O wutere m nke ukwuu ma ị nwere mmasị ụmụ nwanyị na but XD. Ọ bụrụ na ha abụghị ndị Japan, ọ baghị uru itinye ha na ndabere ahahaha
E nwere ezigbo ndị Eshia na ndị ọzọ na-anaghị amasị m. Agbanyeghị, enwere ndị na-ahọrọ ụmụ nwanyị na-emegharị anya na ndị ọzọ na-ahọrọ ụmụ nwanyị na-enweghị obi ụtọ.
Enweghị m iwe iwe banyere nsogbu ndị a, ọ masịrị m ịnwale nkesa dị iche iche iji hụ uru / ọghọm nke sistemụ ọ bụla.
Unu niile nwere uto na ịnyịnya ibu gị, ụmụ agbọghọ Asia niile na-asọ oyi.
Ndị kachasị mma bụ ndị m kwuru na ụfọdụ post post
Oh, yana na “ị” na-ada m iwu formal
Lee anyị niile bụ ndị otu ezinụlọ 😉
Ọ bụ ihe dị n'ụdị ya na ndị ọgbọ ya 😛. Enwere m mmụọ nke Obi ike, achọrọ m ịchụpụ mmụọ.
Ezigbo mma, m na-efu Slackware.
Agaghịzi efu »-» https://blog.desdelinux.net/wallpaper-relajante-slackware-trisquel-puppy-linux-splash-gimp/
Ha niile na-amasị m, dị mfe ma mara mma 😉
Ndewo kedu ka ị mere .. abịakwute m gị ọzọ kemgbe m nwere ụbọchị na-eche mgbe m mechara mkparịta ụka ikpeazụ ma nwee obere anya ejejje
Ọ ga-amasị m ka ị duzie m ntakịrị gbasara ihe dị iche na distro KISS na Roling Release?
Lee ihe m hapụrụ gị na post nke ọzọ, maka na ha bụ ihe nweere onwe ha
Odi nma ma m guru ya .. o di kwa nma .. nwayo nwayo obere nghota m ... ma oge obula ajuju putara xD
Dịka ọmụmaatụ, kodụ ọdịyo na vidiyo etu esi etinye ha, kedụ ihe ga-esi na ya pụta mgbe kernel ga-emelite na nsụgharị ọhụrụ, ọ bụrụ na m wụnye shei gnome ọ ga-emelite na-akpaghị aka mgbe mbipụta ọhụrụ wepụtara
Ajuju dika ndi xD
Ahụrụ m Sabayon n'anya, echere m na m ga-eji ya, n'agbanyeghị, nnukwu peeji, gaa n'ihu otu a: p
Daalụ haha, obi ụtọ ịmara na ị na-amasị obere onyinye anyị 😀
Ugbu a, m ga-enye gị iwu ma hapụ gị ndụmọdụ nduzi nke dị na blọgụ ka ị nwee ike ikpughere m ebe ahụ
Ohhh hermazo ị bụ onye kasị mma 😉 M ga-enwe ekele maka ya .. M hapụrụ gị njikọ a ka ị nwee ike ịchị ọchị ruo nwa oge na-ekiri ihe oyiyi xD
Aga m na-eche ndị nduzi 😉
Haha Achọrọ m ịkụnye ubuntosos ahụ na hahaha:
Ntuziaka ntuziaka nke blọọgụ bụ blọgụ ndị a:
Enwere onye ọzọ na nnọkọ ahụ, mana sava ahụ dị ala.
Nke mbu, tinye otu ihe n’ime igwe mebere
Ezigbo mma .. Ana m agụ akwụkwọ !! Lee anya na pc m enweghị osooso eserese, ọ na - eweta ụgbọ mmiri vidiyo G41 intel agbakwunyere .. ekwesịrị m ịwụnye ihe ma ọ bụ ka m ga - agbaso usoro ndị ahụ dị ka egosiri ebe ahụ
Kedu chipset ọ bụ? Intel 945… Intel 960, olee nke?
Agbanyeghị, echere m na ịwụnye xf86-vidiyo-intel ga-ezuru 😉
Lelee ihe a http://gespadas.com/archlinux-instalacion
N'ezie .. n'ihi na usoro a adịghị ogologo mana ọ na-agwụ ike, ị ga-etinye nnukwu aka na ihe niile .. na igwe mebere m ga-eme
Iji zere nke ahụ, emere m edemede m. M na-agba ya, naanị ya na-etinye ngwugwu niile m chọrọ haha.
Chei, mana ị zaghị ihe m jụrụ gị n’oge gara aga:
-Gịnị mere codec ọdịyo na vidiyo?
- Na Flash ??
- Na Linux mint m wụnye Arial font na iwu a:
"Sudo apt-na-wụnye msttcorefonts"
Echere m na njiko ọ ga - abụ: pacman msttcorefonts ???
Ah nri 🙂
Ka ịwụnye codec ọdịyo na vidiyo, na Debian dịka ọmụmaatụ echere m na ị wụnye GStreamers ka ọ dị mma? M tinyere:
pacman -S gstreamer0.10-ugly-plugins gstreamer0.10-base-plugins gstreamer0.10-good-plugins gstreamer0.10-bad-plugins gstreamer0.10-ffmpeg
Na voila, ndị ahụ nile codecs maka ihe niile 😉
Isi mmalite ndị m na-amaghị, echere m na ọ ga-abụ site na ịwụnye nchịkọta ndị a:
pacman -S opendesktop-fonts ttf-freefont
Agbanyeghị na ịnwere ike i copyomi mkpụrụ edemede na folda akpọrọ .fon (n'ụlọ gị, ọ bụrụ na ọ nweghị, mepụta ya) ọ bụ ya 😀
Caught jidere m n’ihe ndina m, buru n’uche na oge m ha dị iche na carcamales nke blog.
Idebe *** edehie.
Ah bia, ọ bụrụ na itinye a ikwu "Hande" na-eje ije ... LOL !!!
Chọpụta, mana m mezigharị, ọ masịghị nke ọzọ na "webos"
Vertale sharply amaghi m !! ma ihe m maara bụ na m integrated video ụgbọ mmiri na-ekwu intel G41
Ezigbo akwụkwọ ahụ aja, M hụrụ n'anya na fedora 😉
Kedu maka ego dị otú a maka aha ya ... xD (dika egwuregwu)
Arch na Ubuntu
Arch nwere ntọala dị mfe karịa Ubuntu. Y’oburu n’acho ichikota nkpuru aka gi, inwale ihe oru CVS ma obu ichikota ihe site na isi mmalite ya. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgbanye kọmputa gị ma nwee ike iji sọftụwia sistemụ rụọ ọrụ ọsọ ọsọ na-enweghị ọtụtụ nhazi, Ubuntu ka akwadoro ya nke ọma. Ke ofụri ofụri, Mmepe na elu ọrụ eleghị anya na-ahọrọ Arch karịa Ubuntu.
M doro anya !! Echere m na maka ugbu a, agaghị m etinye Arch dị ka usoro ntọala m, mana m ga-anwale ya site na igwe igwe ...
Nke ahụ kwuru, echere m na ọ dịghị mma ịkatọ onye ọrụ na-eji ubuntu ma ọ bụ Linux mint .. n'ihi na dịka e gosipụtara n'ebe ahụ onye na-eji ubuntu eme ihe n'ihi na ọ chọrọ ịgbanye kọmputa ahụ ma nwee ike iji ngwa ngwa sistemụ ngwa ngwa na-enweghị configuring ukwuu ..
Ọ dịlarị mfe !! ọ dịghị mkpa ịkọwa oke ma ọ bụ kwuo na sistemụ ubuntu anaghị arụ ọrụ 😉
Banyere Debian ahahaha M masịrị nkọwa nke ukwuu:
Arch bụ nkesa "na-ejegharị", ebe Debian Stable tọhapụrụ ya na ngwugwu "oyi". xD
N'ezie na Arch abụghị na ị ga-achịkọta ọtụtụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla n'ezie
Egbula gi !!! Will ga - ekwu na ị gaghị achịkọta ihe ọ bụla ị na - eji .. N'ihi na m nwere ike inye gị ihe atụ ole na ole na nke m 😛
Pacman + Yaourt na-eme ka ndụ dịkwuo mfe maka ndị ọrụ na-achọghị ikpokọta.
yaourt -S ngwugwu na voila ... a na-ebudata ma chịkọta edemede ahụ n'onwe ya, na-enweghị ka ị na-enyocha ịdabere, na-edozi ụlọ akwụkwọ, ịmepụta njikọ, wdg.
Otu onye ọrụ ibe gị .. Kedu ihe ị chere Yaourt na-eme? Ọfọn chịkọta ma ọ bụ chịkọta .. Nke ahụ bụ ihe m na-ekwu.
A katọrọ ubunto ahụ, ọ bụghị ubunteros
Arch na nke Fedora
Fedora bu ihe eji ewe Red-Hat. O nwere obodo di uku, otutu ngwugwu edere, na otutu nkwado di. Fedora dabere na nchịkọta RPM. Arch jiri pacman mee ihe .tar.gz. Fedora achọghị ịkwado MP3 n'ihi na ha chere na ọ ga-ebute nsogbu patent. Arch bụ ihe mgbaghara nke MP3 na ụdị multimedia ndị ọzọ. Fedora jiri eserese eserese. Arch na-eji ntinye ihe ndị nọọsụ eme. Fedora bụ onye GUI chụpụrụ. Arch bụ usoro dị mfe karịa Fedora, na-ahapụ onye ọrụ iji hazie ihe n'aka. Arch kachasị maka i686. Fedora nwere usoro ntọhapụ akọwapụtara tupu oge ya. Arch nwere usoro nnabata "ije". A na-eme Arch ka ọ bụrụ usoro dị ọkụ karịa sistemụ arụmọrụ.
Arch na nke Debian
Arch dị mfe karịa Debian. Arch nwere obere ngwugwu. Agbanyeghị, Arch na-enye nkwado ka mma karịa Debian maka iwuli ngwugwu gị. Arch na-anabata ndị ọzọ karịa mgbe GNU kọwara ngwugwu dị ka 'nke anaghị akwụ ụgwọ'. Arch kachasị maka i686 processors. Nchịkọta Arch dị ọhụụ karịa nke Debian (ọbụlagodi na alaka ya anaghị agbanwe agbanwe). Ha abụọ nwere usoro nlekọta ngwugwu mara mma. Arch bụ nkesa "na-ejegharị", ebe Debian Stable tọhapụrụ ya na ngwugwu "oyi".
Ihe ole na ole m nwere obi abụọ banyere:
- N’echiche dị a Araa ka Arch dị mfe karịa Debian?
- Kedu ka o si bụrụ na Arch na-enye nkwado ka mma maka iwuli ngwugwu nke gị?
- Kedu ka esi akpọrọ Arch maka i686?
Ndewo, nke ọma m depụtaghachiri ya na peeji gọọmentị njiri mara na achọrọ m ịkọrọ gị .. mana mụ onwe m na-ahọrọ Debian xD
Ọ bụrụ na anyị idetuo ihe windo weebụ na-ekwu, windo ga-abụ ihe kacha mma sistemụ na akụkọ ihe mere eme aha.
Enwetalala m Debian n'ọnọdụ ndị ọkachamara na Arch dị mfe, ọ na-etinye obere na ndabara, mana amaara m na mgbe ị dị ka nke a, ọ nweghị ụzọ ị ga-esi.
Ọfọn, echere m na ịsị na Arch dị mfe ma wụnye karịa Debian dị oke. Naanị nkebi nke Debian gafere Archlinux nke ọma. Ma ọ dịghị ihe ọ bụla, nke ahụ dabere na onye lere ya.
Kedu mgbe m kwuru na ọ dị mfe ịwụnye? Ihe m kwuru bụ na sistemụ dị mfe
Ọ bụ eziokwu na nkewa na Debian na ọnọdụ ederede dị mfe .. Na-ekele Chineke ejejje xD
nwanne oma kedu ka i mere! ajụjụ nke alaka ụlọ ọrụ ị na-atụ aka na kedu gburugburu ị na-eji ugbu a na Debian?
Enwere m enyo obodo dị na ebe nchekwa Debian. Mana ọ bụrụ na m jiri ndị sitere na ịntanetị, ha ga-abụ ndị a:
Dị ka desktọọpụ gburugburu ebe obibi m na-eji Xfce, agbanyeghị oge ụfọdụ m na-eji Cinnamon agbanwee, Openbox na RazorQt exchange
Akwa. !! Gwa m ihe, ị nwere LibreOffice 3.5 na VLC 2.0?
Ihe karịrị otu izu agabeghị m ịwelite ebe nchekwa m, maka na ihe nkesa m na-emekọrịta ha nwere nsogbu. LibreOffice M tinyere ya na aka .deb site na ebe nrụọrụ weebụ. Amaghị m ma ọ bụrụ na VLC ga-anọrịrị na nchekwa nke ihe m gwara gị na mbụ.
Ah ok ok .. n'ezie m ghọtara ya nke ọma .. otu n'ime ihe ndị mere m ji laghachi Ubuntu bụ n'ihi na amaghị m otu esi etinye nwụnye libreoffice 3.5 na ule debian ... na site na ihe m ghọtara na ọ bụghị ma ruru repositories nke debian ị wụnye ya aka !! mgbe m gbakwunye ya, a ga m esoro ngwugwu ndị nọ na ngalaba ule 🙁 yana ịwụnye isi mmalite aria na debian .. ị ma ka esi eme ya?
Ezi 222 dijo
Ebudatara m ihe ndabere a mana m na-eji chakra nke na-adịghị ebe a>.
Ogbo 84 dijo
Ana m ewere nke ahụ site na OpenSUSE
Zaghachi ka ọ bụrụ84
Twobọchị abụọ gara aga m na-achọ ego nke agba ahụ na amaghị m otu esi achọ. Ọ na-etinye na-acha anụnụ anụnụ dị iche iche mana agba adịghị acha anụnụ anụnụ, ma ọ bụ na-acha anụnụ anụnụ jjajjaja ahụghị m ihe ọ bụla. Daalụ na ha mejupụtara uche m 😀
Zaghachi na pardo
hahahahaha obi uto 😀
Maka ndị chọrọ akwụkwọ ahụaja Slackware.
Zaghachi ka mcder3
Ndia amasi m mmadu, ha bu nwoke na nwanyi hahaha
Akara ọkọlọtọ ị nwere n’akụkụ akara ngosi Firefox XD masịrị m
Enweghị m kọmputa m ma ọ bụ ego maka otu
Mụ nwoke juu, oge gị ga-abịa ka ịnyagharị dịka o kwesiri 😉
Ana m agbalị ire ihe ịzụta otu
Emechara m akwụkwọ ahụaja maka Pardus
Ozi ndi ozo: http://koresource.blogspot.com/2012/02/hb-wallpaper-pack.html
William Abrego dijo
Hey, gịnị mere na Ubuntu akwụkwọ ahụaja… ọ bụ naanị otu n'ime nnukwu nkesa m na-efu na Mandriva
Zaghachi Guillermo Abrego
Mpempe akwụkwọ ahụaja a gụnyere naanị nkesa na-eji gburugburu KDE ma ọ bụ nwee ihe nrụpụta nke gburugburu ahụ.
Anaghị m eme akwụkwọ ahụaja maka gburugburu na nkesa ndị ọzọ na-enweghị KDE na nchekwa ha.
Ekele na mwute maka nsogbu ahụ.
Ma gịnị banyere Kubuntu nke na-eji KDE eme ihe na ndabara, ọ bụghị ọnụ ahụ?
Kubuntu bụ Ubuntu dị iche na KDE ma nwee akwụkwọ ahụaja (nke nwere akara)
Ndewo m ga-ekele gị na blọọgụ, abụ m ọhụrụ na Linux maka ọnwa 5 na ubuntu (abụ m windolero tupu) na ụnyaahụ m wụnye archbang na PC, (n'ihi na Arch ka na-agbapụ m) na laptọọpụ m nwere mint Julia maka ama eserese eserese site na intel gma500, ego ahụ dị ezigbo mma, enwere m olile anya ịmụtakwu obere maka ụwa a.
Zaghachi na davidlg
Nabata davidlg. Ọfọn, nwee mmetụta nke ụlọ na ajụjụ ọ bụla, ị nwere ike ịkpọrọ ha gaa na nzukọ anyị.
Ndewo ma nabata David 🙂
Obi ụtọ inwe gị ebe a, ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ nsogbu ị nwere ike ịga na nnọkọ anyị, anyị bụ otu ndị ahụ anyị kesara ebe a na blọọgụ, dị njikere iji nyere aka
Ekele gị ma nabata gị ọzọ 😀
Enweghi uzo ozo, ufff fuck
ahahaha red hat ahahahahaha
hahaha, o nweghi ihe itinye: elementrị os.
... ma jiri akara ndị ọzọ ... 😛
Ubuntu 12.04 Beta 1 dị!
Otu esi egosipụta windo Mozis na Openbox